Ixabiso eliphantsi le-Plate ye-Organic ye-Waste Composting Turner nge-Hydraulic Control System Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Yintoni i-Chain Plate Composting Turner Machine?
Inkqubo ye- Iplate yeplate yeComposting Turner Uyilo olusengqiqweni, ukusetyenziswa kwamandla kweemoto okuncinci, isixhobo esihle sokunciphisa izixhobo sokuhambisa, ingxolo ephantsi kunye nokusebenza kakuhle. Amalungu aphambili anje: Umxokelelwane usebenzisa umgangatho ophezulu kunye neendawo ezizinzileyo Inkqubo yeHydraulic isetyenziselwa ukuphakamisa nokuthoba, kwaye ubunzulu bengeniso bunokufikelela kwiimitha eziyi-1.8-3. Ukuphakama kokuphakama kwezinto ezibonakalayo kunokufikelela kwiimitha ezi-2, hlala emoyeni ixesha elide, ngaphandle komoya, ezinye iindlela zedumper zinokwenza amatanki okubila amathathu, zisebenzisaIplate yeplate yeComposting Turner, enye yanele.
Yenzani i-Chain Plate Composting Turner Machine esetyenziselwa？
1.Ukusebenzisa i-chain drive, ukurola inkxaso yesakhiwo sepallet, ukuxhathisa i-flip ukugcina amandla, kufanelekile ekusebenzeni okunzulu kwe-groove.
2. I-palip-up pallet ixhotywe ngoxinzelelo oluguquguqukayo kunye nenkqubo ye-damping ye-elastic ukukhusela inkqubo yokuqhuba kunye nokusebenza kunye nokusebenza ngokukuko.
I-pallet yokuphosa i-Flip-splet ine-blade yezinyo egudileyo enxibayo, ekwaziyo ukutyhoboza, isiphumo seoksijini yento esebenzayo.
4.Izixhobo zihlala kwipallet ixesha elide, zisasazeke kakhulu, kwaye zinxibelelana nomoya ngokuzaza okulula.
5. Ukufuduka ngokuthe tyaba kunye nkqo kunokufezekiswa naphi na ekusebenzeni kweflip, ukuhamba ngokuguqukayo.
6. Inxalenye yokunyusa isebenzisa inkqubo yolawulo lwamanzi, umsebenzi oguqukayo, okhuselekileyo kwaye osebenzayo.
7.Ukulawula kude kude kwenqwelomoya ukuya phambili, ukutshintsha okuthe tyaba, iflip kunye nokukhawuleza ukubuyela umva kunye neminye imisebenzi yokuphucula imeko yokusebenza.
8. Isikhethi sokondla izinto zokubeka izinto, isixhobo sokukhuphela esizenzekelayo, igumbi lokuvunda kwelanga kunye nenkqubo yokungenisa umoya.
9.Udibanisa imisebenzi yokujika izinto, elawula i-porosity, yokubonelela ngeoksijini, kunye nokutshintsha kwezinto.
10. Inkqubo yokulawula ngokuzenzekelayo ngotshintsho lokhuseleko kunye nolawulo olukude.
11. Ifakwe isixhobo slot-shift uyakwazi ukuqonda umatshini ekufakwa multi-slot umsebenzi, ukonga imali.
Ityathanga lePleyiti yokuGaya uMatshini oSebenzayo wokuSebenza
Inkqubo yokusebenza ye Iplate yeplate yeComposting Turner isebenzisa umgaqo wokuhamba ngesantya esiguqukayo, esinokulungeleka kakuhle kwizinto ezahlukeneyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza ngokujika okuphezulu kunye nokusebenza okunzulu kwe-groove. Ingalinciphisa ixesha lokuvumba kwaye iphucule ukusebenza kwemveliso kunye nomgangatho wemveliso. Sebenzisa inkqubo yokuhamba ngesantya esiguqukayo, unokuziqhelanisa notshintsho kumthwalo womsebenzi.
Ityathanga lePleyiti yokuGaya uMatshini oMiselweyo
Ububanzi betanki lokuvumba
Ukuphakama kwetanki lokuvumba
Ukufuduswa kwezixhobo kwindawo nganye
Egqithileyo Uhlobo lweGroove Composting Turner
Okulandelayo: Uhlobo lwe-Crawler Uhlobo lwe-Waste Waste Composting Turner yoMatshini